Ataovy Mety Tsara ny Teny Famaranana | Mamaky Teny & Mampianatra
Ataovy Mety Tsara ny Teny Famaranana
Mpitoriteny 12:13, 14
AHOANA IZANY? Ampirisiho faramparany ny mpanatrika mba hampihatra an’izay henony. Ampio koa izy mba hanaiky hoe marina ilay izy.
Ampidiro ao ny hevitra noresahinao. Avereno resahina kely ny hevi-dehibe sy ny foto-kevitra.
Ampirisiho hampihatra an’izay nianarany ny mpanatrika. Atoroy azy hoe ahoana no azo ampiharana an’ilay izy, dia hazavao hoe nahoana izy no mila manao an’izany. Asehoy hoe matoky ianao fa marina izay lazainao.
Ataovy tsotra sy fohy. Aza miresaka hevi-dehibe hafa intsony. Ampirisiho farany ny mpanatrika mba hampihatra an’izay nianarany, nefa aza atao lava be ny teninao.
Aza faranana maimaika ny lahateninao. Tsy mety koa raha hoe ampidininao fotsiny ny feonao. Ataovy mazava tsara kosa hoe efa hamarana ny lahateninao ianao.
Avereno kely ny hevi-dehibe tianao hotadidin’ilay olona, rehefa ho vita ny resakareo. Ary ahoana raha tapaka antenatenany ilay resaka, na sendra olona masiaka ianao? Zavatra tsara foana lazaina alohan’ny hialanao eo, dia mety hihaino anao izy amin’ny manaraka.
Miezaha Hahay Hamaky Teny sy Hampianatra: Ataovy Mety Tsara ny Teny Famaranana